Mitirka Magaalada Izmir, Qaadista 500 kun oo Rakaab Maalintii, Waa 20 Sano Jir | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 IzmirIzmir Metro, oo maalin walba dhoofiya 500 rakaab ah, waa 20 jir
22 / 05 / 2020 35 Izmir, tareenka, Turkish Aegean, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Metro, TURKEY
Izmir Metro, oo maalin walba dhoofiya hal kun oo rakaab ah
Metro, waa dhiiga nololeed ee gaadiidka dadweynaha ee Izmir, waa 20 jir. Nidaamka ay dhiseyso Dawladda Hoose ee Magaaladda ayaa xambaaraya ku dhawaad ​​nus milyan rakaab ah maalintii oo wata khadadka taraamyada.
Metro-ga Izmir, oo ka bilaabay magaalada Izmir bishii Maajo 22, 2000, ayaa dhaaftay 20 sano. Duqa Magaalada caasimada ah Tunç Soyer, oo booqday xarumaha Halkap onnar maalintan gaarka ah ee Izmir Metro, ayaa u dabaaldegay fasaxa shaqaalaha ee idaacadda. Isagoo ka hadlaya halkaan, Madaxweyne Soyer wuxuu yiri İzmir Metro waa mid ka mid ah karaamada magaalada. Isagoo ku nuuxnuuxsaday in waxyaabaha ka dhigaya hay'addu inay sii noolaanayso ay tahay shaqaalaha soo saara adeegyo tayo leh, Soyer wuxuu yidhi: “Sidaa darteed, caafimaad dhammaantiin. Daraasadani waxay sidoo kale ku jirtaa geeddi-socodka dhibaatooyinka corona ee adduunka oo dhan, gaar ahaan Izmir wuxuu la socday isagoo muujiyey daraasad ka socota Turkiga. Degmadeena Magaalada Izmir Metropolitan Dowlada, qeyb kaste oo unugyadu waxay qabtaan waxyaabo kala duwan. Qaar waxay adkeynayaan boolal, qaar waxay nadiifiyaan wadada, qaar waxay isticmaalayaan taraam. Laakiin markay waxaas oo dhami isu yimaadaan, aragtida degmada İzmir ee magaalo-weynaha ayaa la muujiyay. Waxaan jeclaan lahaa inaan idhaahdo waxaan si guul leh u ilaalinay aragtidan.
Magaalada Bronze ee Izmir, Madaxweynaha ugu guulaha badan Turkiga wuxuu xusey in mid ka mid ah Soyer, uu sii waday: “Waxaan ubaahanahay inaan ogaado. Waxaan hambalyeynayaa dhamaantiin intii ka qeyb qaadatay arintan. Caafimaadkaaga oo dhan shaqaalahaaga. Waan ku faaneynaa. Markay noloshu billowdo inay caadi noqoto, waxaan jeclaan lahaa inaan dhammaanteen ku sii wadno u adeegidda sida ugu wanaagsan ee suurtagalka ah.
Intii lagu guda jiray booqashadiisa Duqa Magaalada Soyer, Xoghayaha Guud ee Dowlada Hoose, Dr. Buğra Gökçe iyo Sönmez Alev, maamulaha guud ee Izmir Metro, ayaa la socday.
Waa la jeermiyaa jeer kasta ka dib
Izmir Metro iyo Izmir Tram waxay sii wadayaan howlaha cudurka faafa. Marka la eego cabirrada amniga ee dheeriga ah inta lagu gudajiro howlaha faafa, jeermis-diidka waxaa maalin kasta lagu fuliyaa dhammaan gaadiidleyda. Mar labaad, geedi-socodka jeermi-ku-sii-wadidda ayaa weli lagu dabaqaa xilliyo gaar ah dhammaan xarumaha iyo joogsiyada. Nadiifinta gudaha ee gawaarida, kuwaas oo si nadiif ah loogu nadiifiyey qaybta dharka lagu caday, waxaa lagu sameeyaa iyadoo la adeegsanayo qalab nadiifin aan fiicnayn oo aan waxyeello u geysanayn caafimaadka aadanaha, deegaanka iyo qalabka gaariga. Dhammaan gawaarida waxaa la siiyaa tababar si ay u tababaraan ka dib markay socodsiiyaan howshan oo ay hubiyaan. Gawaarida la nadiifin karo oo jeermiska dila wixii ka dambeeya markay dhamaadaan waqti walba inta lagu gudajiro howlgalka waxaa loo fidiyaa adeega shacabka Izmir. Bixinta adeegga hal-ku-dhigga “Waxaan sugeynay 20 sano, ma sugno”, dhammaan shaqaalaha wadaha darawalka ilaa shaqaalaha nadaafadda waxay ka shaqeeyaan 7/24 badbaadada, raaxada, joogtada iyo nadaafadda.
Waxaa ka bilooday xariiq 11, 5 kilomitir ah
Izmir Metro, oo bilaabatay 20 sano ka hor oo dhererkiisu yahay 10 kilomitir halka 11.5 saldhig ay ku yaalliin, maanta Konak iyo Karşıyaka Isku-darka taraafikada, waxay qaadataa celcelis ahaan 41 kun oo rakaab ah maalin kasta, xitaa wadar dhan 500 kilomitir. Izmir Metro iyo Izmir Tram waxay la kulmaan 24 boqolkiiba gaadiidka dadweynaha ee magaalada. Izmir Metro, oo billowday ka shaqeynta 2000 gawaari sanadkii 45, waxay leedahay rar aad u fara badan oo gaaraya 220 gaari oo ay ku jiraan baabuurta metro-ka cusub iyo gawaarida taraamka muddadii lasoo dhaafay. 20kii sano ee la soo dhaafay, 8 bilyan 1 kun oo rakaab ah ayaa la dhoofiyay, taasoo u dhiganta 1 qof 164 ka mid ah dadweynaha adduunka. Wadarta guud ee 36 milyan kiilomitir ee safarada ah ilaa maalinta ugu horeysa waxay u dhigantaa safarka adduunka 903 jeer.
Khariidadda Nidaamka Wadada Izmir
500 kun qof oo rakaab ah maalintii
Gaadiidka Gaadiidka ee Burcadda ee 7 Binicmaal kun oo Qof ayaa Maalinle ah ku kordhaya Wadada Yalova
Kadıköy-Kartal metro ayaa qaadi doonta 700 kun oo rakaab ah maalintii
15 kun oo dad ah ayaa imanaya Erciyes Ski Center
Marmaray, Ayaa Waxaa Socdaalaya 500 Oo Kun Oo Qof Maalintii, Waxaa Ka Nadiifsan Madaxa ilaa Suul Maalin kasta
3 27 474 Rakaabka la qabadsiiyay Maalintii
TCDD ayaa lagu beegsanayaa in ay qaadaan rakaab kun oo kun oo qof maalintii
8 oo ka mid ah taraamulka gudaha ee Silkworm 50 ayaa raacay XNUMX kun qof oo rakaab ah maalin walba
Izmit Tram wuxuu qaadi doonaa rakaab kun oo kun oo qof maalintii
Mashruuca darawal la'aanta ah ee 4 292 kun iyo rakaab 344 ayaa la gudubtay maalintii
Haydarpaşa 500 ayaa dib loo cusbooneysiin doonaa maalinta